Maxakamadda Ugu sareysay ee Kenya oo Sharciyaysay dib u doorashadii Kenyatta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maxakamadda Ugu sareysay ee Kenya oo Sharciyaysay dib u doorashadii Kenyatta
Maxakamadda Ugu sareysay ee Kenya oo Sharciyaysay dib u doorashadii Kenyatta
Kenya(SONNA) Iyadoo siweyn loo sugaya go’aano ku aadan sharciyada dib u doorashadii madaxweyne Uhurru Kenyatta,ayaa Maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya waxaa ay meesha ka saartay dacwad ka dhan ahayd dib u soo doorashada madaxweyne Uhuru Kenyatta,taasi oo ahayd mid siweyn loo sugayay.
Ilaa 6 garsoore oo dhageysanaysay dacwaddan ayaa isku raacay natiijada guusha madaxwayne Uhuru Kenyatta iyagoo meesha ka saaray eedaymaha la soo jeediyay.
Waxaa Go’aankan ay qaadatay maxakamadda sare ee Dalka Kenay uu waddada u xaarayaa in madaxweyne Uhurru Kenyatta mar kale xilka loo dhaariyo isbuuca soo socdo,tasi oo haatan qaban qaabadeeda ay socoto.
Waxaa la aasaasey Maxkamadda ugu sareysay Dalkaasi Kenya oo sanaddii 2010,iyadoo taariikh sameysay bishii September markii ay waxba kama jiraan ka soo qaaday gushii Kenyatta ee doorashada Agosto. Waxayna amartay in doorasho hor leh lagu qabto lixdan maalmood gudahood.
Taageerayaasha madaxweyne Kenyatta ayaa aad u so dhaweeyey Go’aankaasi,waxaana la arkayay dadweyne aad u badan oo dabaal degyo sameynaya.
Madaxweynaha Kenya Uhuuru Kenyatta ayaa waxaa lafilayaa in dhawaan uu soo dhiso dowlad,isagoo ay horyaaliin arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan maareynta mucaaradada faraha badan ee ka imaanaya xoogaga Mucaaradka.
Previous articleMaamulka G.Banaadir oo furaya Bangi Dhiig +Sawirro
Next articleNatiijada Doorashadii Soomaaliland oo lafilayo in waqtiyada soo socda lagu dhawaaqo